UZuma uzophinda avele eNkantolo yoMthethosisekelo | Scrolla Izindaba
UZuma uzophinda avele eNkantolo yoMthethosisekelo
Lowo owayengumengameli wezwe uJacob Zuma uzophinda avele phambi kweNkantolo yoMthethosisekelo.
INkantolo yoMthethosisekelo ivumile ukulalela isicelo sokudelela ikhomishini yokulawulwa kombuso yindlanzana esibhekene noMsholozi mhla zingama-25 kuNdasa.
Inkantolo inikeze uZuma kuze kube umhla zi-8 kuNdasa ukuthi afake impendulo ecaleni lodaba lokuthi kumele alahlwe yicala lobugebengu nelokudelela.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi edelele umyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo obumyalela ukuba avele phambi kwekhomishini ngoNhlolanja.
IPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo, ongusihlalo wekhomishini, ucele ukuthi uZuma agwetshwe iminyaka emibili ebhadla ejele.
UZuma odelelayo uthe, angancamela ukuya ejele kunokuthi avele phambi kwekhomishini, eyisola ngokumphatha ngokungenabulungiswa.
Khonamanjalo, abakwa-Scrolla.Africa bathole ngomthombo womndeni ukuthi uZuma uzibe amalungu e-ANC ayisithupha ahamba phambili, eholwa nguMengameli Cyril Ramaphosa, obekufanele ahlangane noZuma ngeSonto.
Lo mhlangano ubuhlose ukunxenxa uZuma ukuba avele ngaphambi kwekhomishini ephenya ngokulawulwa kombuso yindlanzana.
Esikhundleni salokho uZuma uye eBukhosini base-Swatini njengesivakashi senkosi.
Phambilini uZuma wathi ngeke asiguqule isinqumo sakhe mayelana nokuvela phambi kwekhomishini kaZondo noma esehlangane nabe-ANC abayisithupha abahamba phambili.
Umthombo wesithombe: News24